China HRC60 Carbide 2 Flute Micro End Mill abavelisi kunye nabathengisi | Mingtaishun
Sikwanaso nesakhono esomeleleyo sokudityaniswa konikezelo lwenkonzo yethu ebalaseleyo, kwaye siceba ukwakha indawo yokugcina kumazwe ahlukeneyo kwihlabathi liphela, oko kuya kuba lula ngakumbi ukunceda abathengi bethu.
Siyakwamkela ngokufudumeleyo ukuxhaswa kwakho kwaye siya kukhonza abathengi bethu ekhaya nakumazwe aphesheya ngeemveliso ezikumgangatho ophezulu kunye nenkonzo egqwesileyo ejolise kutyekelo lophuhliso oluqhubekayo njengakuqala. Siyakholelwa ukuba uyakuxhamla kubungcali bethu kungekudala.
Ukukhetha okubanzi kunye nokuhanjiswa okukhawulezileyo kuwe! Ifilosofi yethu: Umgangatho olungileyo, inkonzo enkulu, qhubeka uphucula. Sijonge phambili ekubeni abahlobo abaninzi nangaphezulu baphesheya bajoyine usapho lwethu kuphuhliso olungaphaya kufutshane nekamva!
Siyakholelwa ukuba ubudlelwane obuhle beshishini buya kukhokelela ekuboneleleni kunye nokuphuculwa kwamacala omabini. Sisekele ubudlelwane bexesha elide kunye noluphumeleleyo lwentsebenziswano nabathengi abaninzi ngokuzithemba kwabo kwiinkonzo zethu ezenzelwe wena kunye nokuthembeka ekwenzeni ishishini. Sikonwabela nodumo oluphezulu ngokusebenza kwethu kakuhle. Ukusebenza okungcono kuya kulindeleka njengomgaqo wethu wokuthembeka. Ukuzinikela kunye nokuzinza kuya kuhlala kunje.
Egqithileyo I-55 ye-HRC yokuphela kwesikwere-4 ifluti D4mm
Okulandelayo: I-HRC55 Carbide 3 Flute Ubude obude beeMill zeAluminiyam